होमपेज - क्यानाडामा मुख्य - BLI · भाषा स्कूल
हामीलाई कुराकानी गर्नुहोस्द्वारा संचालित LiveChat
मान्यता र सदस्यता
प्राथमिक र उच्च विद्यालय
भिसा र CAQ
लाइनमा दर्ता गर्नुहोस्
मितिहरू सुरु गर्नुहोस्
साँझ कोर्स दर्ता
एक एजेन्ट बनें
फ्रेन्च प्लेसमेंट टेस्ट
क्यानाडामा अंग्रेजी र फ्रेन्च
प्रत्यक्ष शिक्षा · प्रेम सिक्दै
के तपाईं हाम्रो शुल्क जान्नुहुन्छ?
दुई अद्भुत स्थानहरू
मोन्ट्रियल र क्यूबेक सिटी
मोन्ट्रियल एक अद्वितीय शहर हो। एक शहर जहाँ भाषा र संस्कृति मिल्यो। एक युरोपी स्वाद संग एक शहर जसले तपाईंलाई पहिलो दिनबाट छुटकारा दिनेछ।
यो एक द्विभाषी शहर स्यान लरेन्स नदी मा एक द्वीप मा स्थित छ। अंग्रेजी र फ्रान्सेली सिक्न र यो एक सांस्कृतिक साहसिकमा विसर्जन गर्न उत्तम स्थान हो।
जब तपाईं आउन छनौट गर्नुहुन्न, त्यहाँ सधै केहि रोचक र मजा गर्न को लागी। चाहे गर्मी, वसन्त, शरद ऋतु वा जाडोमा, त्यहाँ सधैँ केहि चलिरहेको छ।
क्युबेक एक अद्भुत र सुन्दर शहर हो। यो उत्तर अमेरिका मा फ्रांसीसी संस्कृति को दिल हो। नयाँ महाद्वीपमा युरोपको टुक्रा। सेन्ट लर्न्स नदीको किनारमा जादुई, क्युबेक संसारको सबैभन्दा सुन्दर शहर र क्युबेक प्रान्तको राजधानी हो।
यो इतिहास, वास्तुकला र परंपराहरु मा वास्तविक यूरोपीय अपील संग धनी छ।
सबैभन्दा ठूलो क्यानेडियन शहर हो जुन 100% फ्रान्कोफोन हो, क्यूबेक तपाईंको भाषामा विभेद गर्न सक्ने ठाउँ हो र त्यही समयमा यो सुन्दर शहर तपाईंको लागि छ!
कार्यक्रमहरूको एक विस्तृत विविधता
BLI ले तपाइँका आवश्यकताहरु अनुरूप एक विस्तृत विविधता कार्यक्रम प्रदान गर्दछ। BLI मा तपाईंले कार्यक्रम खोज्नुहुनेछ भन्ने कार्यक्रम पाउनुहुनेछ।
हाम्रो आवास विभागले तपाइँलाई छनौट गर्न विभिन्न विकल्प प्रदान गर्दछ।
हाम्रो सामाजिक कार्यक्रममा भाग लिन सक्ने भाषालाई तपाईंले लाइभ लाइभ गर्नुहोस् जुन हरेक दिन महान गतिविधिहरू प्रदान गर्दछ।
हामीले यो सिक्ने अनुभव बाँचिरहेका छौं जब तपाइँलाई आवश्यक सबै सहयोग चाहिन्छ।
भिषा र सीएक्यू सहायता
यदि तपाईंलाई आगन्तुक भिसा वा क्यानडामा आउन एक अध्ययन अनुमति चाहिन्छ भने, हामी तपाईंलाई प्रक्रियाको साथ सहयोग गर्न सक्छौं।
हामी तपाइँको स्वास्थ्य बीमाको ख्याल राख्न सक्छौं, जुन सबै विद्यार्थी क्यानाडामा आउन अनिवार्य छ।
हामी तपाईंलाई उठाउँदछौं र हवाईअड्डामा छोड्छ क्यानाडामा तपाईंको यात्रा अनुभव सजिलो र सजिलो रूपमा।
हाम्रा विद्यार्थीहरू के भन्नुहुन्छ
मैले अहिलेसम्म सबैभन्दा राम्रो अनुभव गरेको छु। म यहाँ मोन्ट्रियलमा यति धेरै मजा आयो। मलाई पनि थाहा थिएन। खाना, मान्छे, ठाउँहरू, जुन चीजहरू तपाईं गर्न सक्नुहुनेछ, चीजहरू सिक्नुहुन्छ, दैनिक जीवनमा एक राम्रो तरिकामा मन्ट्रियलको थोडा इतिहास सिक्नु हुन्छ।
म 100% सिफारिस गर्छु र म फेरि दुई पटक सोचेर फेरि आउनेछु
अंग्रेजी विद्यार्थी - मेक्सिको
जब म क्यानाडा आइपुग्यो, मलाई कुनै अंग्रेजी र न त फ्रान्सेली थाहा थिएन। बीएल द्विभाषी कार्यक्रम लिइसके पछि, मेरो भाषाको दुवै भाषाहरूमा धेरै सुधारिएको थियो। आज म भन्न सक्छु म म व्यावहारिक हुँ
द्विभाषी विद्यार्थी - ब्राजील
मैले अंग्रेजी सिक्नको लागि BLI मा नामांकन गरें र म6महिना भन्दा कम मा एक उच्च माध्यमिक विद्यार्थी बन्छु। शिक्षकहरू धेरै पेशेवर छन् र उनीहरूलाई निश्चित छ कि तपाईंले बुझ्नुहुन्छ र सिकाउनु हुने सबै कुरा सिक्नुहोस्। कक्षाहरू धेरै अन्तरक्रियात्मक छन्। स्कूलमा विश्वभरका छात्रहरू छन् त्यसैले मैले धेरै साथीहरू बनाउन सक्थे।
अंग्रेजी विद्यार्थी - कोरियाली
मन्ट्रियल, क्यूसी, क्यानाडा, एचएक्सएनमिक्स 2S1
763, rue सेन्ट जोसेफ ई।, सूट 104
Québec, QC, क्यानाडा, G1k 3C6
प्रतिलिपि अधिकार 2017 BLI क्यानाडामा भाषा स्कूलहरू, सबै अधिकार सुरक्षित